Wararka – PuntSom – kalasoco wararka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu booqasho ku tagayaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Safarka Madaxweynaha waxaa qeyb ka noqonaya Wasiiro, Xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka, iyada magaalada Jabuuti looga diyaar garoobay soo dhaweynta Madaxweynaha. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay ...
Sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Duulista Hawadda Soomaaliya waxaa shaqo joojin lagu sameeyay Maareeyaha Hay’adda Duulista Hawada Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf (Jaalle). Maxamed C/laahi Oomaar Wasiirka Duulista Iyo gaadiidka Hawada ayaa shaqo joojinta ku sameeyay Maareeyaha. Wasiirka duulista Hawadda Warqad ka soo baxday Xafiiskiisa , waxaan si KMG ah shaqada loogu soo dhiibay Ku xigeenkiisa Maadaama Yuusuf ...
July 5, 2018	Leave a comment 68 Views
Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u fadhiyay dalalka caalamka. Arintani ayaa la sheegay in ay ka dambeyso isbedel balaaran oo madaxweynuhu uu ku sameynayo xiriirka diblomaasiyadeed Soomaaaliya kala dhexeeya caalamka waxaana safiirada ilaa haatan la badalay ...
Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa xalay fiidkii gaartay diyaarad sidday C/kariin Sheekh Muuse Qalbidhagax, kaasoo dhawaan ay dowlada Ethiopia kasii daysay xabsiga . Boqolaal ruux ayaa Qalbidhagax kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Joma Kenyatta waxaana dadka soo dhaweeyay kamid ahaa Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, gudoomiyihii hore aqlabiyadda barlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin iyo dadweyne kale. Kadib ...
July 5, 2018	Leave a comment 32 Views
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wareegta uu kasoo saaray xafiiska xalay isku shaandheyn lama filaan waxa uu ugu sameeyay Golihiisa Wasiirada, waxaana isku shaandheyntan kasoo muuqday xubno cusub oo kamid noqday golihiisa wasiirada. Ku dhawaad 11 wasiiro ah ayay saameysay isku shaandheyntani uu sameeyay madaxweyne madoobe,waxaana wasiirada qaar loo kala badalay wasaaradihii ay xilal ka hayeen,halka qaar ...
June 25, 2018	Leave a comment 95 Views
Wasiiro, xildhibaano, saraakiil iyo waxgarad reer Puntland ah oo gaarey duleedka deegaanka Tukaraq ee furimaha dagaalka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen war culus oo ku aadan bilowga dagaalka lagu xoraynayo gobolka Sool. Halkaan ka dhageyso.
June 25, 2018	Leave a comment 70 Views
Barnaamijka Xiisaha Laha ee kaftanka Siyaasada Ayaa Looga Hadlay Todobadkani Heshiiskii Itoobiya Iyo dowlada Soomaaliya. waxaana Looga Hadlay Xirirka Itoobioya Iyo dowlada Farmaajo ka Dhaxeeya Labadooda Madama Hore uu u Necbaa Itoobiya. Halkaan ka daawo Muuqaalka.
June 25, 2018	Leave a comment 98 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa dhambaal Hambalyo u diray dhigiisa dalka Turkiga Rejeb Dayib Ordagan oo guul taariikhi ah ka gaaray doorashadii waqtigeeda laga soo hormariyey ee kadhacday maanta dalka Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in Shacabka iyo Dawladda Soomaaliyeed ay Hambalyada iyo farxadda la qeybsanayaan walaalahooda Turkiga oo ay garab iyo gaashanba isku ...
June 25, 2018	Leave a comment 118 Views
Madaxweynaha xilka haya ee dalka Turkiga ayaa mar kale ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkaasi markii dadka dalkaasi ay u doorteen Recep Tayyip Erdogan inuu mar kale noqdo madaxweynaha dalkaasi. Waxaan halkan ku eegeynaa taariikh nololeedka madaxweynaha Erdogan. Magaciisaoo buuxaa waa Recep Tayyip Ahmet Erdogan. Wuxuu dhashay sannadkii 1954-kii. Wuxuu ku dhashay degaanka la yidhaa Kasimpasa oo jaar la ah caasimada ...
June 25, 2018	Leave a comment 249 Views
Taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland General Nuux Ismaaciil Taani oo farriin xasaasi ah looga soo duubay taliska ciidanka Soomaaliland ee Gooja cadde ayaa farriin muhiim ah u soo diray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Taliyaha ciidanka Puntland General Siciid Dheere. General Taani ayaa waxa uu sheegay in dagaal uusan faa’iido ku jirin oo loo baahan yahay in nabadda ...
DAAWO-Cabsi Soo Food Saartay Madaxda Somaliland ee Laascaano Ku Sugan Ciidanka Puntland oo Galay iyo Ciidamo La Soo Dhoobay Kantaroolada.
June 25, 2018	Leave a comment 408 Views
Saqdii dhexe ee xalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo katirsan kuwa Puntland oo hab xeeladaysan ku galay magaalada iyo kuwa Soomaaliland. Dagaalka ayaa hal daqiiqo gudeheeda waxa uu si isku mid ah uga qarxay labo kamid ah saldhigyada ay gacanta kuhayaan ciidamada Soomaaliland, waxaana ay ka bexeen magaalada aroortii hore ee shalay ...
June 19, 2018	Leave a comment 229 Views
Boqor Iimaan oo ka mid ah Waxgaradka Gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa ugu baaqay Maamulada Puntland iyo Somaliland iney nabada qaataan,islamarkaana ay joojiyaan Xiisada dagaal ee ka taagan Tukaraq. Boqor Iimaan ayaa sheegay in dagaal uusan Wiil ku dhashan balse uu ku dhintay loona baahan yahay in si nabad ah loogu wada noolaado goobaha dagaalada ay ka jiraa, Maamulada ...
June 19, 2018	Leave a comment 419 Views
Dowladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday inuu khilaaf ka dhex aloosmay ciidamada Soomaaliland ee ku sugnaa gobolka Sool, islamarkaana ay cutubyo katirsan ciidankeedu ka bexeen gobolka, waxaana ay dowladdu ay shacabka Sool ka raali gelisey inay ka maqnayd 11 sano. Halkaan ka dhageyso.
June 18, 2018	Leave a comment 115 Views
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan xildhibaanada federaalka ee mucaaradsan madaxda dowlada ayaa dhaliilay War murtiyeedkii shalay ka soo baxay dowladaha Somalia iyo Itoobiya ka dib booqashadii uu dalka ku yimid raisul wasaare Abiy Ahmed. War murtiyeedka oo ka koobnaa 16 qodob oo khuseeya xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ayaa waxaa ku jiray qodob xasaasi ah oo sheegaya ...
June 18, 2018	Leave a comment 226 Views
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidamada difaaca Puntland ay go’ doon galiyeen saldhigyo iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland kadib markii ay ka wajaheen dhowr jiho oo dhaca fadhiisimo ay ku leeyihiin ciidamada Somaliland deegaanka Tukaraq iyo Gambara ee gobolka Sool. Buuraha dhaca Koonfur bari deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxaa haatan ku sugan ciidamada Puntland, iyadoona ...
June 18, 2018	Leave a comment 80 Views
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cismaan Eng Yariisoow oo ka qeeybgalayay Munaasabad ka dhacday Xarunta Safaarada Turkiga ee Muqdisho ayaa ka hadlay Arimo la xariira Diplomaasiyiinta ku sugan Muqdisho. Eng Yariisoow ayaa amaan u jeediyay Dowlada Turkiga isaga oo sheegay in safaaradeeda ay ku taala Bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyay Dalalka kale in ay ka ...
June 18, 2018	Leave a comment 56 Views
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in Madaxweynaha Jubbaland uu kulan deg deg ah isugu yeeray Saraakiisha Ciidamada maamulka Jubbaland. Kulankaan oo hadda ka socda Madaxtooyadda Jubbaland ayaa ah mid diiradda lagu saarayo sidii loo xaqiijin lahaa Ammaanka degaanada maamulka Jubbaland. Kulankaan ayaa waxaa shir guddoominaya Madaxweynaha jubbaland Axmed Madoobe , waxaana ku ...
DEG DEG: Banaanbax Xooggan oo hadda ka socda magaalada Garowe & Shacab badan oo isugu soo baxay…
June 18, 2018	Leave a comment 213 Views
Banaan-bax ballaaran ayaa ka socda Magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowladda Gobolleedka Puntland, kaasi oo looga soo hor-jeedo Dan-daansiga Maamulka Hargeyso iyo Duulaanka uu ku soo Qaaday Dhulka Puntland. Banaan-baxan ayaa waxaa isigu soo Baxay Boqolaal Shacabka, kuwaasi oo ku dhawaaqaya Erayo ka dhan ah Maamulka Hargeyso ee ku soo duulay Dhulka Puntland. Dadka ayaa Sidoo kale, ku dhawaaqaya Erayo ay ...
Xukuumada Somalia oo War Kasoo saartay Hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ‘hal dal ayaan Noqonaynaa’
June 18, 2018	Leave a comment 224 Views
Kadib kulan muhiim ah oo maalin kahor Muqdisho ay ku yeesheen madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu heshiiyay ilaa 16 qodob oo muhiim u ah xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Daahir Maxamuud Geelle oo faah faahin ka bixinayay heshiiskaasi ayaa waxa ...
XOG XASAASI AH: MD Farmaajo & R/wasaaraha Itoobiya oo Qorshe halis ah u degay M/Gobolleedyada(AKHRI)
June 17, 2018	Leave a comment 129 Views
Kullan gaar ah oo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Iyoobiya Aby Ahmed oo shalay booqasho rasmi ah ku yimid Muqdisho ayaa waxay kaga hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay in Itoobiya si toos ah ula macaamisho Dowladda Federaalka Soomaaliya,islamarkaana aanay arrimaha quseeya danta dalka iyo dadka kala hadlin maamul Gobolledyada. Mudane ...
Akhriso Maxaadan ogeyn oo ka cusub Isku Socodka iyo Amniga Muqdisho?
June 17, 2018	Leave a comment 79 Views
Waxaa dib loo furay qeybo ka mid ah waddooyinkii xirnaa labadii maalmood ee Ciidul Fitriga iyo maalmihii u dambeeyay ee Bisha Ramadaan, iyadoo saaka uu bilowday isu socodka dadka iyo gaadiidka oo loo diidayay waddooyinka qaar. Qeybo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama ayaa saaka la arkayay iyagoo furan oo dib gaadiidka ay u isticmalayaan, sidoo kale waxaa weli xiran ...
XOG: Xaalad Halis ah oo ka dhex jirta Al-Shabaab & Xaaladda caafimaad ee Amiirkooda oo laga deyrinayo
June 17, 2018	Leave a comment 127 Views
Warar kala duwan ayaa marba marka ka sii danbeyso ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee Hogaamiyaha Ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye “ Abuu Cubeyda”. Abuu Cubeyda ayaa la sheegayaa inuu la canuunsanayo Cudurka Kansarka oo Caloosha ka haleeyay,isagoo Xaaladiisa Caafimaad laga deyrinayo. Lama oga halka sida rasmiga ah Hogaamiyaha Al-Shabaab ugu xanuunsanayo,balse warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya mid ka ...
WAR CUSUB Xaalad Cakiran oo ka jirta magaalada Laascaanood & Ciidanka S/land oo ku guuldareystay sii heynta magaaladaasi
June 17, 2018	Leave a comment 244 Views
11 Sanno ka hor Somaliland waxay qabsatay Laascaanood oo xiligaas ay jireen tabashooyin badan oo ay qabeen Waxgaradka, Shacabka & Siyaasiinta miisaanka siyaasadeed ku leh gobalka Sool, waxay kala waregeen ciidamada Puntland, waxaana bishii October 2007-dii kusugnaa Hotelka Xamdi ee magaaladaas wafdi ka socday dhinaca Puntland, laakiin wafdigaa lama jecleyn marka laga hadlayo siddii ay Odayaashu ugu imaanayaan. 11 sano ...
DEG DEG-Isimo Ka Socda Gobolka Awdal Soomaaliland oo Garoowe Soo Gaarey…..
June 17, 2018	Leave a comment 303 Views
Magaalada Garoowe e caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta waxaa soo gaarey wafti isimo ah oo ka socda deegaamada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo kamid ah gobolada ay dadka kunooli sida weyn u xushmeeyaan umadda Soomaaliyeed. Isimadaan oo safar dheer ku soo maray qaar kamid ah deegaamada Soomaalidu degto ayaa la sheegay inay deegaamada Puntland u yimaadeen arrimo la xiriira ...
DEG DEG+DHEGAYSI-Ciidanka Puntland iyo Soomaaliland oo aad Isugu Soo Durkay iyo Dagaal Laga Cabsi Qabo.
June 17, 2018	Leave a comment 336 Views
Ciidamada Puntland ee ku sugan duleedka Tukaraq ayaa 72-dii saac ee ugu dambeeyey lagu soo waramayaa inay si aad ah isugu soo dhowaadeen iyadoona laga cabsi qaba dagaal ka dhex qarxa markale labada ciidan. Qaar kamid ah dadka fara kutiriska ah ee ku haray deegaamadaasi oo lahadlay warbaahintu waxay sheegeen in ciidanku ay mar walba isku dhowaadaan xilliyada habeenkii ah, ...
Khaladaadka Hab maamuuska Qaranka ee dhacay Mudadii Qaabilidda Ra’iisul wasaaraha Itoobiya (Warbixin )
Khaladaad kala duwan ayaa ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo si la mid ah gudaha madaxtooyada “Villa Somalia” intii lagu guda jiray qaabilidda Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo booqasho gaaban oo rasmi ah ku yimid dalka. Haddaba waxaa halkan idin kugu soo gudbineynaa khaladaadkii hannaanka hab maamuuska ee la hareer maray:- 1- iyadoo la dhowrayo xilka, heybadda iyo hab maamuuska ...
DEG DEG: Madaxweyne Xaaf oo ku dhaawaqaya Gole Wasiiro oo Cusub
June 17, 2018	Leave a comment 86 Views
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa lagu waddaa in Saacaddaha soo socda in uu ku dhawaaqo Gole Wasiiro sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug. Madaxweyne Xaaf ayaa lagu waddaa in uu Magaalada Dhuusamareeb uu kaga dhawaaqo Gole Wasiiro oo ay kasoo dhex muuqan doonaan Xubno ka tirsan maamulkii Ahlusunna ee Galmudug raacay. Xaaf ayaa soo gabagabeeyay Wadatashiyo uu ...
June 17, 2018	Leave a comment 126 Views
Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi ayaa qoray faallo uu ku sheegay in qodobka 7-aad ee heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen Ethiopi iyo Somalia ee dhigaya in si wada-jir ah loo maal-gashado dekedaha, loo arki karo tallaabo uu Abiy Ahmed ku sharciyeeyey heshiiskii dekedda Berbera ee xukuumadda Muqdisho ay su’aalaha ka keentay. Inkasta oo heshiiska aan lagu magacaabin afarta ...
AKHRISO; Meydadka 38 Itoobiyan oo Daacish Surka ka Jareen oo la raadinayo & Dowlad balan qaaday iney…
June 11, 2018	Leave a comment 88 Views
Madaxweynaha dalka Masar, C/fataax Al-sisi waxa uu cafis u fidiyey 32 Maxaabiis Ethiopian ah, kuwaasi oo sii-dayntooda lagu soo beegay Booqashadii uu Ra’isul-wasaaraha Ethiopia, Abi Axmed ku joogay magaalladda Qaahira. Saraakiil Masaari oo aan fasax u haysanin inay la hadlaan Saxaafadda ayaa warkan u dusiyey Wakaalladda Wararka ee Associated Press (AP). Ra’isul-wasaare Abi Axmed waxa uu sii-daynta Maxaabiistaasi shalay ka ...
AKHRISO: Magacyada Guddiga Doorashooyinka Oo Shahaadooyin KMG Guddoonsiiyey 5-Xisbi Siyaasadeed
Munaasabad Maanta lagu qabtay Magalada Muqdisho ayaa waxaa Gudiga doorashooyinka Qaran ayb Shahaadooyinka KMG ah guddoon siiyeen Shan Xisbi siyaasadeed oo dalka ka jira Xisbiyada Maanta Shahaadooyinka la siiyey ayaa ku biiraya 10 xisbi oo horay Guddiga doorashooyinka Shahaadooyin u siiyeen,si ay Sanadka 2020 uga qeyb qaataan doorashooyinka dalka ka dhacaya. Hoos Ka Akhriso Magacyada Xisbiyada Maanta Shahaadooyinka KMG ah ...
DEG DEG+AKHRISO-Diyaar Garawga Dagaalka Gobolka Sool oo Sii Xoogaystay iyo Madaxweyne Gaas oo Maanta Ku Dhaawaaqay.
June 11, 2018	Leave a comment 207 Views
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu Mudane Abuubakar Cabdi Geelle oo ah nin dhalinyaro ah ugu magacaabay gudoomiyaha gobolka Sool, isla markaana waxa uu xilka ka qaaday gudoomiyihii hore.
DEG DEG+AKHRISO-Somaliland oo Go’aan Lama Filaan ah Ku Dhawaaqday Raaligelina Ka Bixisay Qorshe Dagaalka Tukaraq Kadhashay.
June 11, 2018	Leave a comment 342 Views
Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Ayaa Raaligalin ka Bixisay Go’aan Hore ugu Soo Baxay Wasaaradaas oo ahaa in SomNews Tv Laga Mamnuuco in uu ka Howlaglo Deegaanada Somaliland, sidaa waxaa lagu yiri war Saxaafadeed ka Soo Baxay Xafiiska Wasiirka Warfaafinta ayaana lagu Sheegay.
June 10, 2018	Leave a comment 28 Views
Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta amray in la burburiyo dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaabta bacdamaa goobtaas ay tahay mid dan guud si loogu soo celiyo sideedii hore. Duqa Muqdisho ayaa kal hore hakiyey dhismaha goobtan ka dibna u direy baaris rasmi ah. Iyadoo la fulinayo awaamiirta Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayuu ...
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in shil gaari oo ka dhacay Magaalada ay ku geeriyoodeen Saddex Caruur ah oo Walaalo. Shilka, waxa uu ka dhacay Xaafada Masalaha ee dhacda Koofurta Hargeysa, waxaana Dhaawac daran oo soo gaaray Isbitaalka weyn loola Cararay Caruurtii uu jiiray Gaariga Candha Meydlaha ah ee lagu qaato Alaabaha Bagaashka ee Goobaha Ganacsiga la ...
(DAAWO)Dowladda Puntland oo dowladda Somalia ku Eedeysay dagaalka Iyo in ay Hurinayso Xaalada deegaanada…..
Gudiga difaaca dowladda Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen lacag dhan 1 million oo dollar oo dowladda Soomaaliya ugu deeqday dadka duufaantu saamaysay ee kunool Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xirsi Tima-cadde iyo afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa soo dhoweeyey lacagtaasi in loogu deeqo dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan haseyeeshee ...
DAAWO-Madaxweynaha Somaliland oo War Lama Filaan ah Ka Soo Saaray Dagaalka Tukaraq,”Dagaal Hadda Munaasib Mahan”.
June 5, 2018	Leave a comment 199 Views
Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo bilowgii sanadkaan amar ku bixiyey in ciidankiisu ay galaan deegaamada Puntland gaar ahaan deegaanka Tukaraq ayaa haddana waxa uu ku hadlay ereyo ka duwan kuwii hore. Halkaan ka daawo Muuqaalka.
Gobolka Bari: Duqeyn dhanka cirka ah oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab
June 4, 2018	Leave a comment 27 Views
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan Africom ayaa sheegay in duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab ay ka fuliyeen meel magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari u jirta illaa 26 mile. Duqeyntan oo dhacday 2-dii bishan June ayuu Mareykanka sheegay inuu ku dilay 27 ka tirsan Al-Shabaab. War saxaafadeed ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika ...
Dowlada Soomaaliya Oo lacag dhan 1 Milyan oo Dolar Ugu Deeqday Somaliland-DAAWO
June 4, 2018	Leave a comment 32 Views
Dawladda Soomaaliya ayaa hal milyan oo Doollar ugu deeqday hawlaha gurmadka duufaatanadii ka dhacay degaanada Maamulka Somaliland. Gudiga Qaran ee gurmadka oo uu shir gudoominayay Raiisal wasaare ku xigeenka dalka ayaa sheegay in Dawladdu ay dadaal badan ku bixisay sidii loo caawin lahaa muwaadiniinta ay saameeyeen fatahaadaha iyo roobabka dabaylaha watay ee ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada dalka. ...
June 4, 2018	Leave a comment 28 Views
Magaalada Baydhaba waxaa goordhowayd ka furmay shirka amniga Qaranka, kaas oo ay ka qeybgelayaan Madaxda ugu sarreysa dalka, kuwa Maamul Goboleedyada iyo Taliyayaasha kala duwan ee Ciidamada Soomaalida. Waxyaabah diirada lagu saarayo shirka isla markaana looga hadlayo waxaa kamid ah xaalada guud ee amniga dalka,Isku dhafka Ciidanka iyo bixinta mushaharaadka iyo hirgelinta Nidaamka Federaalka dalka,waxaana madaxda dowlada Federaalka iyo kuwa ...
June 4, 2018	Leave a comment 211 Views
Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay sheegay in dalkiisa uu dhisanayo ciidamada badda iyo maraakiib dagaal, inkasta oo ay jirto in Ethiopia aysan lahayn wax bad ah, oo ciidamadaas ay ka howl­galaan. Dad badan oo Soomaali ah ayaa durba billaabay inay is­weydiiyaan sida dal aan bad lahayn uu ciidan bad ku yeelan karo.Is­weydiin kaliya maahee, qaarkood ayaa billaabay inay ka wallaacaan hadalka Abiy Ahmed iyo saameynta uu ku ...
XASAASI: Warbaahinta oo Loo Diiday inay ka qeyb galaan Shirka Aminga Qaranka ee Baydhabo
June 4, 2018	Leave a comment 29 Views
Warfidiyeenka ka howl-gala magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta mar kale loo diiday inay baahiyaan wararka shirka amniga qaranka ee ka socda magaalada Baydhabo. Muxyadiin Xusni oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala Baydhabo oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in ay wada hadleen wasiirka warfaafinta maamulka Xasan Cabdi Maxamed isla markaana ...
(DHEGAYSO) Dowladda Puntland oo jawaab ka bixisay Baaq kasoo yeeray wasiirka cadaalada ee maamulka Hargeysa.
June 4, 2018	Leave a comment 159 Views
Afhayeenka dowladda Puntland, Cabdulaahi Maxamed Jaamac(Quraanjecel), ayaa maanta jawaab ka bixiyay hadal kasoo baxay wasiirka cadaalada iyo arrimaha Diinta ee maamulka Hargeysa, kaasoo ku baaqay IN wada hadal nabadeed laga galo colaada ka taagan gobolka Sool. Quraan jecel ayaa u sheegay Sheikh Khaliil in maamulkooda uu kusoo duulay gobolka Sool, iyagoo ku xalaashanaya inuu Ingiriisku siiyay, taasina ay tahay waxa ...
DHAGEYSO:Shirka Jaraaid ee Guddiga difaaca Puntland oo maanta ku dhawaaqay War culus oo ka dhan ah Somaliland.
June 4, 2018	Leave a comment 108 Views
Guddiga Difaaca ee dawladda Puntland oo goor dhaw wariyaasha kula hadlay magaalada Garoowe ayaa si adag uga hadlay arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood, dhalinyarro laga celiyey madaarka Hargeysa, wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Galgala, Tukaraq iyo arrimo kale. Guddiga Difaacu waxay ogeysiiyeen shacabka Laascaano in ay ka digtoonadan dhagaraha maamulka Hargeysa ay abaabulayaan, oo ay ku doonayaan in ay caburin, ...
June 3, 2018	Leave a comment 51 Views
Somalia’s presidential election last year seen as milestone of corruption by some and others as a fresh start for a war ravaged country is looking more and more like a false dawn – a huge opportunity lost. The Nation’s new government has taken U-turn on the long walk to democracy since coming to power in February 2017. In the face ...
Wafti Uu Hogaaminayo Madaxweyne Farmaajo Oo Gaaray Magaalada Baydhabo Iyo Ahmiyada Shirka amniga
June 3, 2018	Leave a comment 15 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Baydhaba halkaas oo maalinta berri ah uu si rasmi ah uga furmayo Shirka Golaha Amniga Qaranka. Shirkan oo saddexdii biloodba mar la qabto waxaa looga hadli doonaa amniga guud ee dalka, hannaanka federaalaynta, wadaaga khayraad dalka iyo tayeynta iyo isku dhafka ciidamada. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ...
Ciidamo Faro Badan Oo Ku Qulqulayo Tuka-Raq Iyo Warar Hoose Oo Soo Baxayo
June 3, 2018	Leave a comment 48 Views
Saacadihii ugu dambeeeyey fariisimada dagaalka gobolka Sool waxaa gaarey ciidamadii ugu badnaa ee katirsan ciidanka difaaca Puntland, halka saacadaha soo socdana lafilayo inay gaaraan ciidamo kale oo hor leh. Ciidamadan oo ah kuwa fara badan ayaa ka yimid inta badan gobalada Puntland, waxayna si toos ah u gaareen Jiidaha dagaalka, taas oo cabsi iyo baqdin ku abuurtay ciidamada maamulka Somaliland ...
DEG DEG-Barlamaanka Puntland oo War Ka Soo Saaray Dagaalka Tukaraq Eedayna u Jeediyey DFS.
Guddiga Amniga & Difaaca ee baarlamaanka Puntland oo goor dhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay xiisadda dagaal ee ka soo cusboonaatay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq, iyagoona xukuumadda ku ammaanay sida ay uga jawaab celiyeen daandaansiga Soomaaliland. Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad gudoomiyaha gudiga difaaca iyo amniga barlamaanka Puntland oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in ...
DEG DEG-Madaxtooyada Puntland oo War Ka Soo Saartay Xaaladda Tukaraq iyo Howlgalka Xoraynta Gobolka Sool.
Dawladda Puntland waxay u sheegeysaa Ummada Soomaaliyeed, Hay’adaha u dooda xaquuqul Insaanka sida Human Rights Watch iyo Beesha Caalamka in shacabka ku nool Degmada Laascaanood ay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag oo aan loo dul-qaadan karin. Degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxaa hadda ka socda caburin, xarig iyo jirdil aan la aqbali karin oo loo ...
Shir Xasaasi Ah oo Muqdisho ka furmay oo looga hadlay dagaalka Puntland Iyo Somaliland Ee Tukaraq.
May 28, 2018	Leave a comment 196 Views
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dib-uheshiisiintaXukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Mohamed Sabriye ayaa shir guddoomiyeyay sir meeqaamkiisu sarreeyo oo looga hadlayay xasilinta dalkaasi,kaasi oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo intiisa badan diiradda lagu saarayay xasilinta dalka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mas”uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya madax ka socotay maamul ...
DHAGEYSI XAASAASI AH:M/kuxigeenka Puntland oo ku dhawaaqay dagaal culus Sheegayna in dagaalka uu soconayo Ilaa………
May 28, 2018	Leave a comment 234 Views
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey oo goor dhaw la hadlay warbaahinta dawladda PuntlandTV ayaa sheegay in uu soconayo dagaalka gobalka Sool hadda ka bilowday oo uusan istaagi doonin inta TAAKO kamid ah dhulka Puntland ay ku jiraan ciidamada Somaliland. Madaxweyne kuxigeenku wuxuu sheegay in ay Jeelasha iyo Xabsiyada Laascaano ay ka buuxaan shacabkii oo xabsiyada lagu guray, ...
DHAGAYSO:Maamulka Maakhir oo Dagaalka Tukaraq Kusoo Biiray Somaliland U Hanjabey
May 28, 2018	Leave a comment 615 Views
Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ah Afayeenka Isimada Puntland ayaa waxa uu madaxda Puntland ugu saraysa ugu baaqay in ay gutaan masuuliyada dastuuriga ah ee ka saaran soocelitanta gobolada maqan ee Puntland. Garaadka waxa uu yiri, “waxba soo kordhin mayaan warsaxaafadeed la soo saaro markasta.” Garaadka ayaa waxa uu ka hadlay baaqyada laga soo saaro dagaalka Tukaraq, waxa uuna yiri, ...
DAAWO: Guddoomiiye Iidle oo ka hadlay sababta MD Farmaajo xilka kaga qaaday+”SIR CULUS”
May 28, 2018	Leave a comment 300 Views
Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan oo wareysi siiyay VOA-da ayaa ka soo horjeestay xilka qaaditii uu ku sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay xil ka qaadis ku sameeyay Guddoomiyahii Maxakamadda Sare ee dalka Mudane Ibraahim Iidle Suleymaan, waxa uuna xilkaas u magacaabay Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. Madaxweynaha oo tixgalinaya cabashada ...
Sawirro-Dibad Baxyo Ka Socda Laascaanood iyo Weriye Bidhaanshe oo Xabsiga Ladhigay.
Mudaharaad xoogan ayaa ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool, kaas oo lagaga hor jeedo wax ay dadweynaha mudaharaadaya ugu yeereen caburin ay Somaliland ku hayso dadka ku dhaqan magaaladaas. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalda Laascaanood waxaana la maqlayaa rasaas xoogan oo ay ridayaan ciidamo isku dayaaya inay xakameeyaan mudaharaadka socda. Ciidanka ammaanka maamulka Soomaaliland uu ...
VIDEO-Puntland oo Ku Dhawaaqday Dagaalkii Ugu Cuslaa oo Lagu Xoraynayo Lascaanod una Digtey DFS.
May 28, 2018	Leave a comment 268 Views
Shirkaan jaraa’id oo gudiga difaaca Puntland ku qabteen magaalada Garoowe ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, hadal ka soo yeeray Soomaaliland iyo wadahadalo laga galo dagaalka Puntland iyo Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dowlad) ayaa Soomaaliland ku eedeeyey inay cabburin ku hayso shacabka gobolka Sool. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel oo ...
Puntland oo ka jawaabtey hadalkii Madaxweynaha Somaliland MBC
War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa looga jawaabey khudbad uu jeediyey Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi (MBC), war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu ka leexanayo runtu waxay tahay taas oo ah in uu duulaan qaawan ku soo qaadey Puntland isla amrkaana dhegaha ka furyestey baaqyadii caalamku u jeediyey dhamaantood, Puntland ayaa ku tilmaantey MBC ...
( AKHRISO) Ujeedka rasmiga ah ee Booqashada Ra’iisul Wasaare Khayre ee Addis Ababa
May 27, 2018	Leave a comment 41 Views
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay dhigiisa dalka Ethiopia Dr,Abiy Ahmed. Kulankan oo ay wada yeesheen labada Ra’iisul wasaare ayaa waxaa looga hadlay qodobo kamid yihiin Kobcinta dhaqaalaha, Horumarinta caafimaadka, waxbarashada, iyo amniga guud ahaan gobolka gaar ahaan sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka waxa ay ugu yeereen ...
Cabdi Xaashi “dagaalka Tukaraq in lagu tirmo mooyee maaha mid lagu tarmayo-DHAGEYSO
May 27, 2018	Leave a comment 28 Views
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka kasoo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool una dhexeeya Puntland iyo Somaliland. Cabdi Xaashi Cabdilaahi Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalka Tukaraq uu yahay mid dhibaato mooyee aan wax faa’iido ah wakhti xaadirkan aan laga dhaxleyn isla markaana horseedaya burbur ...
Shabaab oo Saacaddo maamulaayay degaano ku yaalla Kenya
May 26, 2018	Leave a comment 117 Views
Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa Saacaddo kooban waxa ay maamulaayeen degaano ka tirsan gobolka Waqooyi ee dalka Kenya sidda ay xaqiijiyeen Hay’addaha Ammaanka dalka Kenya. Degaanka lagu Magacaabo Komor Xayle oo ku yaalla Degmadda Mandhera oo u dhow Xuduudka Kenya la wadaagto Soomaaliya ayay Shabaab xalay galeen. Shabaab ayaa dadka degaanka la hadlay,islamarkaana u jeediyay Khudbado Sidda ay xaqiijiyeen ...
DHEGAYSO-Puntland oo War Culus Kaga Dhawaaqday Degmada Taleex Maxaa Kajira in Ciidamo u Goosteen Somaliland.
May 26, 2018	Leave a comment 439 Views
Gudoomiyaha Degmada Taleex ee Gobalka Sool ayaa beeniyey in ciidamo ka goostay Puntland ay ku biireen Maamulka Soomaaliland. Gudoomiyaha Degmada Taleex Maxamuud Cali Warsame oo waraysi siiyey Radio Garoowe ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin ciidamo ka tirsan Soomaaliland oo la doonayo in lagu marin habaabiyo dadka gobalka Sool. Halkaan ka dhageyso.
(DAAWO)Wax ka ogow Safarka Ra’iisul Wasaare Khayre uu ku tagay dalka Itoobiya…..
May 26, 2018	Leave a comment 155 Views
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa gaaray magaalada Addiss Ababa ee dalka Ethiopia. Wafdiga Ra’iisul wasaaraha oo casuumad rasmi ah ka helay Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed, ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Ethiopia. Ra’iisul Wasaare Khayre iyo masuulyiinta la socota ayaa kulamo la ...
War deg deg ah Somaliland oo wax ka badashay Jihooyinka ay ka dagaalamayeen iyo Puntland oo dhaqdhaqaaq Xoogan kala hortagtay……
May 26, 2018	Leave a comment 798 Views
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada ay isku horfadhiyeen ciidamada Puntland iyo Somaliland, ayaa sheegaya in xiisadaha kabada dhinac u dhaxeeya ay kordheen saacadihii ugu dambeeyey, ayna muuqata ifafaalo dagaalo hor leh oo socda. Maamulka Somaliland ayaa saacadihii ugu dambeeyey bilaabay in ay bedelaan jihooyinka ay ka dagaalamayaan ee gobalka Sool, waxayna isku dayeen in ay furin kale ...
XOG: Kullan xalay ay magaalada Laascaanood ku yeesheen Guddiga dagaalka Somaliland oo Natiijo la’aan ku soo dhammaaday
May 26, 2018	Leave a comment 345 Views
Wararka aan ka heleyno magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in xalay kullan magaaladaasi ay ku yeesheen guddiga dagaalka ee Somaliland u xilsaaratay dagaalka gobalka Sool natiijo la’aan ku soo dhammaaday. Guddiga dagaalka ee Somaliland u xilsaaratay dagaalka gobalka Sool,ayaa waxaa qeyb ka ah Xubno Wasiiradda, Xildhibaanada iyo Taliyaha ciidamada maamulkaas ee kusugan deegaanada gobalka. Waqti dheer ayuu qaatay kulanku wuxuuna gaaray ...
WAR DEG DEG AH-Boqolaal Shacab ah oo Isugu Yimid Bartamaha Buuhoodle iyo Madax Puntland ah oo La Hadlaya.
May 26, 2018	Leave a comment 815 Views
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo banaan bax ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle loogana soo horjeedo daandaansiga Soomaaliland. Qaybaha kala duwan ee bulshadii ka qaybgashay mudaharaadkaani ayaa muujiyey dareenkooda, waxayna sheegeen in aad uga soo horjeedaan waxa socda oo ay taageersan yihiin ...
Madaxweyne Farmaajo “Xabad joojin degdeg ah hala sameeyo, dhiiga daadanayana hala baajiyo”+SAWIRRO
May 25, 2018	Leave a comment 84 Views
Muqdisho, 25ka May, 2018: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyay in si shuruud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool, isaga oo caddeeyay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay sameysay, walina ay waddo dadaal kasta oo lagu baajin karo in la daadiyo dhiiga dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo maanta hadalkan ka ...
May 25, 2018	Leave a comment 750 Views
Xog ay warbaahinta ka heshay gudaha deegaanka Gambara iyo Taliska ugu sareeya ee ciidamada Somaliland ayaa sheegaya in uu fashil kusoo dhamaaday kulan deg deg ah oo ay xalay yeesheen saraakiisha ugu sareysa taliska ciidamada Somaliland, kaas oo ay uga wada hadlayeen sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen dhinaca Puntland, waxaana meel sare gaaray khilaafka huursanaa ee u dhaxeeyey dhinacyadan. ...
May 25, 2018	Leave a comment 140 Views
War saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Saadaasha Cimilada ee urur-goboleedka IGAD ayaa digniin ka bixisay waxa ay ku tilmaantay xaaladda isa sii taraysa ee duufaanno ka soo kacaya gudaha badweynta hindiya, kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mid xeebaha Puntland. Qubarada ku xeeldheer saadaasha cimilada ee xarunta saadaasha cimilada IGAD ayaa sheegaya in duufaanadu dhanka waqooyi u sii socdaan ilaa ...
WAR CUSUB:Puntland oo Saacada Nagu soo Wajahan soo bandhigaysa gaadiid dagaal & Maxaabiis ay ka qabatay Somaliland iyo Xogo hordhac oo sheegaya in Sargaal
May 25, 2018	Leave a comment 486 Views
Warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in Dawladda Puntland, gaar ahaana guddigeeda Difaaca ay soo bandhigi doonaan gaadiid dagaal, hub iyo maxaabiis laga qabtay Somaliland dagaalkii cuslaa ee shalay dhacay, isla markaasna ay saxaafadda la wadaagi doonaan. Guddiga Difaaca ee Puntland ayaa kulan arrintan ka yeeshay subaxnimadii hore ee Jimcaha maanta, waxayna isku afgarteen in saxaafadda loo soo bandhigo maalinta ...
DHEGAYSI XASAASI AH-Wararkii Ugu Dambeeyey ee Tukaraq Kadib Dagaal Shalay Lagu Jabay.
May 25, 2018	Leave a comment 522 Views
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu hadda ka helayno deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladdu ay saaka sidii shalay ka degan tahay uusanna jirin dagaal foolka fool ah oo dhexmaray ciidamada labada dhinac ee ku sugan aaggaasi. Ciidanka Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku sugan yihiin fariisimadii ay kaga sugnaayeen shalay galab deegaankaasi, ...
XOG: Maxaa ka jira in lacag ka timid Qadar loo qeybiyay Xildhibaanada?
May 25, 2018	Leave a comment 76 Views
Waxaa soo shaac baxaya warar sheegaya in lacag aan mushaar ama gunno ahayn oo loo qeybinayo Xildhibaanada Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Baaritaan uu sameeyay mid ka mid ah mareegaha Puntland ee wax lagu qoro ayaa lagu ogaaday in Xildhibaan kasta la siinayo $5,000 [Shan Kun oo Dollar], taasi oo siyaabo kala duwan loo fasiray ujeedka laga leeyahay iyo ...
Ciidamada amaanka Muqdisho oo xalay qab qabtay Mooto Bajaaj badan
Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ku soo qab qabtay Mooto Bajaaj ka badan ilaa iyo Lixdan mooto Bajaaj, iyadoona ciidamada amaanka ay ku soo bandhigeen Saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ciidamada amaanka ayaa Mootooyinka la soo bandhigay waxaa ay ku sheegeen in ay ahaayeen kuwo Taargo la’aan ah, laguna ...
Beesha Caalamka oo War Culus Kasoo saartay dagaalka Tukaraq iyo in Si deg deg ah loo kala……..
May 25, 2018	Leave a comment 187 Views
Saaxiibada Soomaaliya ee Beesha caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin isku-dhacyada hubaysan ee ugu dambeeyay ee shalay ka dhacay agagaarka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool una dhexeeya Puntland iyo Somaliland, waxayna ku baaqeen xabbad-joojin deg deg ah. Dagaal culus ayaa aroortii shalay subax ka dhex qarxay ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxaana dagaalkaas uu geystay khasaare ...
WAR DEG DEG AH-Maxaa Saaka Ka Cusub Deegaanka Tukaraq iyo Fariisimada Ciidanka.
May 25, 2018	Leave a comment 1,477 Views
Donald Trump Sababta uu o baajiyey Kulankii Kim Jong Un
May 25, 2018	Leave a comment 89 Views
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu 12-ka bisha June dalka Singapore kula yeesho madaxweynaha Korea-da Waqooyi Kim Jong Un. “Aad ayaan u danaynayey inaan halkaas kula tago, hase yeeshee nasiib darro marka la eego carada iyo caadaawadda muuqata ee ka muuqday qoraalkiinii ugu dambeeyey, waxaan dareemayaa inaysan habbooneyn inaan waqtigan kula yeesho kulanka la qorsheeyey” ayuu ...
DAAWO VIDEO DEG DEG:Buuhoodle Ciidamo Ka Gurmanaya”Jihaad Ayaa Ka Furan Tukaraq”
May 25, 2018	Leave a comment 2,872 Views
Odayaasha iyo waxgaradka Buuhoodle ayaa sheegay in dagaalka ka socda gobolka Sool uu yahay difaaca dalka iyo dadka Puntland oo ay sheegeen in Somaliland weerar gardaro ah kusoo qaaday. Caaqil Cabdilaahi Xasan Qambi oo kamid ah cuqaasha ugu caansan gobolka Cayn oo la hadlay barnaamijka Caawa iyo Daljir ee ka baxa Radio Daljir ayaa sheegay in dagaalkan masuuliyadiisa ay qaadayso ...
Madaxweyne Farmaajo oo Ka Dulboodey Puntland Arrinta Tukaraqna Wadahadal 4 Qodob ah Kala Galay Somaliland.
May 25, 2018	Leave a comment 564 Views
Dagaalada u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland ee ka taagan deegaanka Tukaraq iyo deegaamada hoosyimaada ayaa noqday kuwa soo noqnoqda waxaana markii labaad dagaal xoogan duleedka Tukaraq ku dhexmaray ciidamada labada dhinac. Waanwaantii ay wadday beesha caalamka oo qaramada midoobey ay hormuud u tahay ayaa guul daraystay waxaana socdaalkii danjire Micheal Keating uu ku soo dhammaaday guul darro kadib markii isagoo ...
MAXKAMAD SOO GUNAANADAY DHAGEYSIGA DACWADDA RAG WEERAR KA GEYSTAY MUQDISHO
May 24, 2018	Leave a comment 178 Views
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya, ayaa soo gabagabeysay dacwad loo haysto raggii ka dambeeyay weerarkii 28-kii bishii Oktoobar ee sannadkii hore lagu qaaday Hotelka Naasahablood Laba ee Muqdisho. Dhageysiga Dacwadda Raggan ayaa muddo soo socotay, Waxaana Xafiiska Xeer-ilaalinta Ciidanka Qalabka sida ay ku soo eedeeyeen saddex eedeysane inay ka dambeeyeen weerarkaas. Eedeysanayaasha ayaa waxay magacyadoodu kala ...
VIDEO-Faysal Cali Waraabe,”Waa Nala Gaaday”, Wuxuuna Farriin u Diray Maraykanka Isagoo Kari Waayey Magicii Mahad Canbaashe.
May 24, 2018	Leave a comment 582 Views
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo lahadlayey Warbaahinta deegaamada Soomaaliland ka howlgash ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Tukaraq lagu gaaday, wuxuuna soo hadal qaaday wadahadalo Maraykanku waday. Halkaan ka daawo Muuuqaalka.
DHAGEYSO-Muuse Biixi ‘dagaalku Wuu socdaa oo labo dhinac ah Xilli Ramaadan ah Somaliland waa ay…..
May 24, 2018	Leave a comment 492 Views
Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Ayaa ka hadlay Dagaal saakay Soomaaliland iyo Puntland ku Dhexmaray Tuka Raq. Muuse Biixi oo Socdaal ku maraya Deegaanada ay abaaraha ku dhufteen ee Bariga Soomaaliland ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya iyo Puntland ay weerar ku soo qaadeen sida uu hadalka u dhigay. “Anaga oo ku jirna gurmad ayaa waxaa weerar nooga yimid Soomaaliya halka ...
DAAWO-Hubkii iyo Gaadiidkii Saaka Laga Furtay Soomaaliland oo Garoowe Lageeyey.
May 24, 2018	Leave a comment 1,799 Views
Magaalada Garoowe ayaa waxaa goor dhoweyd la soo gaarsiiyey qar kamid ah gaadiidkii ay ciidanka difaaca dowladda Puntland maanta ka qabsadeen ciidamada maamulka Soomaaliland. Gaadiidka dagaalka ee lasoo qabtay waxaa ka mid ah Qoryaha Zuu-ga oo 4 baabuur ah iyo Beebayaasha dagaalka oo ilaa hadda 2 baabuur ah, waxaana laga keenay hal goob oo uu dagaalkan culusi ka dhacay. Halkaan ...
Muuqaal-Dowladda Puntland oo Si Hordhac ah u Soo Bandhigtay Xogta Dagaalkii Tukaraq iyo Tirada.
May 24, 2018	Leave a comment 4,090 Views
Dowladda Puntland ayaa waxa ay goor dhoweyd waxa ay soo bandhigtay xogta rasmiga ah ee dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, waxaana ay sidoo kale eedayn kulul u jeedisey maamulka Soomaaliland oo cabburin ku haya shacabka gobolka Sool. Halkaan ka daawo Muuqaalka.
War Saxaafadeed deg deg ah oo laga soo saaray Madaxtooyada Puntland oo ku Aadan dagaalka Saaka Tukaraq
May 24, 2018	Leave a comment 550 Views
Dawladda Puntland waxay usheegaysaa Ummada Soomaaliyeed iyo Beesha Caalanka in saaka Arooryo Abaara 5.30 subaxnimo ay marka kale Soomaaliland soo weerartay Ciidamada Puntland ee ku sugan deegaanka Tukaraq. Dawladda Puntland waxay caddeynaysaa in mas’uuliyada dagaalkaas uu qaadayo Maamulka Hargeysa oo ah duulaaan joogto ah, isla markaana Puntland ay difaacayso dalkeeda iyo dhulkeeda. Dawladda Puntland waxay usheegaysaa shacabkeeda dhammaan gudo iyo dibad-ba in ...
DEG DEG+DHEGAYSO-Masuul Katirsan Puntland oo Ka Hadlaya Dagaalka Socda Tukaraq Saaka Shacabkana Inay Kacaan Ugu Baaqay.
May 24, 2018	Leave a comment 1,329 Views
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal u dhexeeya ciidanka Puntland iyo Soomaaliland oo saaka ka qarxay qaar kamid ah fariisimadii ciidanka Puntland iyo Soomaaliland ee deegaamada Tukaraq ee gobolka Sool. Mid kamid ah masuuliyiinta Puntland oo bilowgii dagaalka hadlay ayaa sheegay in dagaalku bilowday islamarkaana wuxuu shacabka reer Puntland ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaalkii ugu dambeeyey ...
May 24, 2018	Leave a comment 67 Views
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa xalay daah-furay Qorshaha midaynta iyo Daadejinta Sugidda amniga Caasimadda iyada oo mas’uuliyadda qorshahan looga fadhiyo maamulka Gobalka Banaadir iyo guddoomiyayaasha degmooyinka kuwaas oo kaashanaya laamaha amaanka. Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in wixii hada laga bilaabo ciidan kasta uu ka amar qaadan doono guddoomiyaha degmadda ay ka shaqeynayaan, si ay ...
War deg deg ah Khasaare dhimasho iyo dhaawac Jira iyo Puntland oo Saldhigayo hor leh qabsatay iyo dagaal culus……
May 24, 2018	Leave a comment 1,474 Views
Warsidaha Puntsom.com oo si toos ah aad ugala soconaysaa dagaalka culus ee u dhaxeeya ciidamada Difaaca ee dawladda Puntland & maleeshiyaadka soo duulay ee maamulka Hargeysa ayaa wararka hadda kuso dhacaya warqabadka ay xaqiijinayaan in ay guulo labo dhinac ka gaareen ciidamada Difaaca ee dawladda Puntland. Xogtu waxay sheegaysaa in baabuur dagaal, Maxaabiis iyo dhimashaba ay ka dhalatay dagaalkan, waxaana ...
Dawladda Puntland Oo Ka Tacsiyeeysay Geerida Xildhibaan C/xakiim Macalin Daahir.
May 24, 2018	Leave a comment 139 Views
Dawladda Puntland waxay ka tacsiyaynaysaa dilkii xalay fiidkii lagu dilay Marxuun Xildhibaan C/xakiim Macalin Daahir oo ka mid ahaa Golaha Wakiiladda Dawladda Puntland, Marxuunka ayaa xalay fiidkii isagoo soo afuray dablay hubeysan ku dishay Magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Tacsi guud u diray dhammaan goleyaasha Dawladda Puntland iyo shacabkooda, sidoo kale wuxuu Madaxweynuhu si ...
WAR DEG DEG AH: Dagaalka Xoreynta G Sool oo aagag cusub ku fiday & Ciidamada Difaaca Puntland oo ……..
May 24, 2018	Leave a comment 971 Views
Wararka naga soo gaaraya jiidaha dagaalka ee gobalka Sool ayaa sheegaya in uu sii xoogeysanayo dagaalka culus oo aroornimadii hore ee saaka ka qarxay, kaas oo u dhaxeeya ciidamada Difaaca ee dawladda Puntland iyo kuwa maleeshiyaadka Somaliland, waxaana aagag cusub uu ku fiday dagaalkan. Dagaalka ayaa sii xoogeysanaya khasaaraha ka dhashay ilaa hadda cidna faahfaahin kama bixin karto, waxaase la ...
DEG DEG DAAWO: RW Kheyre oo Xalay Magacaabay Golle Wasiiro Cusub (Magacyadooda)
Ra’isul Wasaaraha DFS Xasan Cali Kheyre ayaa saqdii dhexe ee caawa soo magacaabay xubnaha golahiisa wasiirada ee ka banaanaa Xukuumadda Soomaaliya. Wareegto kasoo baxday Xafiiska RW kheyre oo laga sii daayay raadiyaha iyo Tv-ga dowladda ayaa lagu soo bandhigay magacyadda Wasiirada, Wasiiro-dowlayaasha iyo Wasiiro ku xigeenada buuxin doona boosaskii banaanaa. HOOS KA DAAWO MUUQAALKA MAGACAABIDDA WASIIRADDA.
Guddoomiye Yariisow oo fulinaya Wareegto 4 Bilood ka hor kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha (Akhriso sababta)
May 24, 2018	Leave a comment 54 Views
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa dib u soo nooleeyay wareegto laga soo saaray Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya intii aan xilka loo magacaabin oo ku saabsaneyd Dhulka Danta Guud. Guddoomiye Yariisow ayaa in Khubaro iyo Guddi baaris loo xil saarayo dhulalka Dowladda ee sida sharci darada loo bixiyey kadib markii ay cabashooyin ka yimaadeen, isagoo aan sheegin cidda ay ...
Xildhibaan Puntland ah oo caawa kooxo Hubaysan ay dileen…….
May 23, 2018	Leave a comment 152 Views
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in caawa magaalada Gaalkacyo lagu dilay Xildhibaan c/xakiin daahir Macalin oo ka tirsanaa baarlamanka Puntland. Kooxo hubaysan oo gaaraya 4 dablay ah ayaa xildhibaanka ku dilay hoteel classic iyo mid ka mid ah Ilaaladiisa sida aan warka ku helayno. Kooxdii dilka geysatay ayaa goobtii falkaasi ka dhacay ka baxsaday, waxaana meydka Xildhibaanka ...
DEG DEG: Imtixaankii dowladda ee dugsiyadda Sare oo baaqday
Wasaaradda Waxbarashadda dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta uu baaqday Imtixaankii dugsiyada Sare ee shalay ka furmay Magaalada Muqdisho iyo maamulada kale ee dalka. “Dhamaan Kormeerayaasha iyo Ardayda Imtixaanka galaysa Waxaa la idinku war galinayaa In Imtixaanka maanta 20/05/2018 uu Baaqday/ aan la galeyn Roobaab ka da’aayo Gobolka Banaadir iyo gobolo Kale awadeed” ayaa lagu war kasoo baxay Wasaaradda waxbarashada ...
May 17, 2018	Leave a comment 416 Views
Afhayeenka Isimada Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo waraysi gaar ah siinayey Radio Garoowe ayaa waxa uu si kulul uga hadlay dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland. Garaad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu yahay daandaansi iyo duulaan qaawan oo ay Soomaaliland ku soo ...
Duufaan halis ah oo ku soo fool leh dhul xeebeedka Soomaalida 24-48 Saac Nagu soo wajahan.
May 17, 2018	Leave a comment 125 Views
Duufaan xoog leh oo loo bixiyay ONE ayaa ka soo kacaysa waqooyiga badwaynta Hindiya waxaana la filaya in ay saamayn doonto inta badan gobollada Jamhuuriya iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland iyo Puntland 24 ilaa 48 saac ee foodda inagu soo haysa, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha ee FAO. Duufaantan ayaa lagu wadaa in ...
May 17, 2018	Leave a comment 209 Views
Waxaa goordhaw qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso uu ka dhacay laamiga hor mara xerada Saban Saban ee magaalada Muqdidho, waxaana qaraxan lala eegtay gaari Tikniko ah ay wateen ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya. Goobjooge ayaa noo sheegay in Qaraxa Miino lagu aasay laamiga dhinaca xigta Kulliyada Jaalle Siyaad ay degan yihiin Ciidamo AMISOM katirsan, waxaana qaraxa uu dhacay xili halkaasi ...
May 17, 2018	Leave a comment 251 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftigii uu hogaaminayey ayaa Maanta 17 May 2018 dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Dowladda Puntland. Madaxweynaha iyo weftigiisa oo saaka kasoo kicitimay magaalada Baydho ayaa waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee Janaraal Maxamed Abshir maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garoowe, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, Taliyaha Ciidanka ...
May 10, 2018	Leave a comment 155 Views
Xalay Saqdii dhexe ayaa Diyaarado dagaal waxa Ay duqeyn la fuliyeen deegaano hoostaga degmAda Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose duqeyntaas ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Duqeynta ayaa waxa ay ka dhacay tuulooyin u dhow deegaanka Bariire ee isla Gobolkaas,waxana soo baxayay in duqeyntaas dadka ku geeriyooden badi ay ahaayeen dad Shacab ah. Warar aan heleyno ayaa waxa ...
(DAAWO)Puntland oo Xoriyadooda usoo celisay Maxaabiis u dhashay dalka Iran
May 10, 2018	Leave a comment 80 Views
Kaluumeysatada lasiidaayey oo u dhashay dalka Iiraan ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 17 kuwaas oo mudo 8 bilood ah xirnaa kadib markii Puntland ay xukun isugu jira lacag iyo Xabsi ku ridday. Maxaabiista Kaluumeysatada ah ee u dhashay dalka Iiraan maantana lasiidaayey ayaa waxaa laga qabtay Xeebaha Maamulka Puntland. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Nuux Ciise ayaa ugu horayn ...
May 10, 2018	Leave a comment 95 Views
Ciidamada Kumaandooska Dowlada Soomaaliya ay la socdeen Ciidamo Mareykan ah ayaa lagu soo waramayaa in xalay howlgal ka fuliyeen Deegaan u dhaxeeya Degmada Afgooye iyo Bariiri. Sida aan Wararka ku helnay ciidamada howlgalka fuliyay ayaa watay diyaaradaha nuuca Qumaatiga u kaca, waxa ayna ciidankan howlgalka xoogiisa ka fuliyeen deegaan ku dhaw Bariire oo lagu magacaabo Macalinka. Dadka ku dhaqan deegaanka ...
Madaxweyne Donald Trump oo hanjabaadii ugu cusleyd hawada u mariyay Iran
May 10, 2018	Leave a comment 54 Views
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay dowlada Iiraan in cawaaqib xumo kala kulmi doonto hadii ay dib u bilowdo in ay sameesato hubka halista ah ee Nukliyeerka. Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii dhinaca hubka Nukliyeerka dowlada Mareykanka la gashay Xukuumada Tahran, waxa uuna sheegay Madaxweynaha in heshiiskaasi uu ahaa mid hal dhinac ah. Madaxweynaha Mareykanka si cad ...
Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo xalay gudaha u galay degaanka Baxdo oo Mudo 30 daqiiqo ah dadka…….
May 10, 2018	Leave a comment 131 Views
Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay gudaha u galeen degaanka Baxdo oo 90-KM ujira Magaalada Cadaado ee xarunta Gobolka Galgaduud, sida ay inoo sheegeen ilo dhinaca ammaanka ah. Ragga Shabaabka tirsan ayaa waxa ay gudaha degaanka la galeen laba gaari oo nuuca dagaalka ah, waxayna tageen Masjidka ugu weyn ee degaanka, halkaasi oo dadka degaanka ay ...
May 10, 2018	Leave a comment 62 Views
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir gudoominaya shir xasaasi ah oo golaha wasiirada dowladda Puntland ay kuyeelanayaan maanta aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe loogana arrinsanayo xaaladda guud ee Puntland iyo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Xukuumadda Puntland ayaa ka walwalsan in nidaamkaasi uu noqdo mid la hareer maro xili ay doonayso Soomaalidu in waxa lagu dhaqmaa ay tahay wax ...
Sawirro-Madaxweynihii Hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole oo Garoowe Xalay Kulan Xasaasi ah Kula Qaatay
May 9, 2018	Leave a comment 110 Views
Madaxweynihii hore ee Puntland Dr, Cabdiraxmaan Faroole, ahna xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa kulan casho sharaf ah magaalada Garowe ugu sameeyay Xildhibaan Liibaan Cismaan oo ka kamida golaha shacabka DFS. Labada xildhibaan oo kulankooda masuuliyiin kale ay ku wehliyeen waxa si qoto dheer isaga xog waraysteen Siyaasadda guud ee dalka, gaar ahaan howlaha iminka socdam kaalinta Puntland ...
DAAWO VEDIO: C/wali Gaas oo weerar ku qaaday Xildhibaanada Aqalka sare ee laga soo doortay P/land wax matarayaalna ku tilmaamay
May 9, 2018	Leave a comment 88 Views
Madaxweynaha Puntland oo magaalada Garowe kaga qeyb galay shir looga hadlay dib u eegista dastuurka ayaa eedeyn u jeediyay Xildhibaanada Aqalka sare ee laga soo doortay Puntlanad oo aan u soo dhicin hanaanka saami qeybsiga. Sidoo kale,C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay deeqaha lagu helo magaca Soomaaliya iyo hanaanka loo qeybsado,wuxuuna carabka ku adkeeyay inaan soo dhaafin magaalada Muqdisho ...
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inuu ka baxayo heshiiskii Niyukliyeerka ee lala galay dalka Iiraan. Trump ayaa go’aan la wada sugayay ka jeediyay Aqalka Cad, wuxuuna sheegay inuu isaga baxayo heshiiskaasi, isagoo caddeeyay in heshiiskaasi oo maamulkii Obama uu galay u ahaa mid aad u xun oo aan la aqbali karin. Trump ayaa sheegay inuu dhowr ...
May 9, 2018	Leave a comment 66 Views
Siyaasiga Faarax Macalin oo Wareysi siiyey Tv-ga RTN ee Magaalada Nairobi ayaa ugu horayn wax ka warbixiyey Safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya iyo Wuxuu kusoo Arkay. Dhinaca kale wuxuu ka hadlay arimaha Maamulka Jubbaland Wuxuuna sheegay in Axmed Madoobe uu ku Kooban yahay 5-kiilo Mitir oo ku xeeran Kismaayo, Sidoo kalana aanu wax dan ah u ...
XOG XASAASI: Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo la ogaaday iney wada hadal kula jiraan Dowladda Somalia
May 8, 2018	Leave a comment 175 Views
Sida aan xog hoose ku helnay, xubno sare oo ka tirsan maleeshiyada Al-shabaab ayaa haatan waxay wadahadal kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya. Xubnahan ayaa u badan saraakiil walibana kasoo jeedda dhanka gobolka Gedo, waxayna si toos ah ula hadlayaan dowladda madaxweyne Farmaajo. Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo shegay in tiro ahaan ragga ay yihiin 32 oo u badan saraakiil ...
Guddoomiyaha cusub e Golaha Shacabka oo baaraya kiiska ugu horeeya oo kashifaad ku ah…..
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in uu baaris ku sameynayo lacago sanadihii dambe loo keydin jiray Golaha Shacabka. Lacagtaan uu sheegay in guddoomiyaha uu baarayo ayaa ah lacag bil walbo laga jari jiray Xildhibaanada oo ah 100 doolar bil walbo. Guddoomiyaha ayaa Xildhibaanada ka codsaday in ay fursad siiyaan isla markaana uu soo baarayo ka dibna ...
VIDEO+WARBIXIN-Afar Bilood Kadib Qabsashadii ee Deegaanka Tukaraq Maxaa Isbedeley Maxaase Dhacay?
May 8, 2018	Leave a comment 137 Views
Ciidamada maamulka Soomaaliland oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa 8-dii bishii January ee sanadkaan waxa ay gacanta ku dhigeen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo dagaal kooban ay kula galeen ciidamo katirsan kuwa dowladda Puntland. XIlliga ay ciidanka Soomaaliland qabsanayeen deegaanka Tukaraq waxaa magaalada Garoowe ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daahfurayey dhismaha garoonka diyaaradaha Garoowe ee General ...
DAAWO VIDEO:cabdiraxman c Shakuur oo weeraray kenya iyo Siyaad Bare,Xafladii Nairobi looga Diidey ka Hadlay.
May 8, 2018	Leave a comment 224 Views
cabdiraxman cabdishakuur Ayaa Xaflad uu ku qabtay magaalada London waxaa uu ku Weeraray madaxda Dowlada Soomaaliya Isagoona Ku Tilmaamay Inay Yahiin Kuwo la Dhaqan Ah Dowladii Dhexe ee Siyaasd Bare. Waxa uu ka Hadlay xafladii laga Joojiyey Magaalada Nairobi Isagoo Ku Amaanay London Inuu Si Xor Ah uu xaflad ugu qabsaday. Halkaan ka daawo Muuqaalka.
LA OGAADAY: Soomaaliya Oo Hub Casri Ah Ka Iibsaneysa Dowladda Aan Laga Fileyn (Waa Tee)
May 8, 2018	Leave a comment 149 Views
dowladda Soomaaliya oo wadda qalabeynta ciidankeeda ayaa haatan waxay waddaa qorshe weyn oo ay hub kusoo iibsaneyso. Maadaama DFS loo ogol yahay iney keensato hub ay isku difaacdo ayaa la sheegayaa in markaan ay wadahadal hoose kula jirtyo Laba dowladood. Dowladahan ayaa kala ah Maraykanka iyo sidoo kale Ruushka, waxaana ay rabtaa middii heshiis ahaan u sahlanaata iney hub cajiib ...
DHAGEYSO:Axmed Madoobe oo Shaaciyay cida uu la safan yahay Dowladda Somalia iyo Imaaraadka
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shalay dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose, kadib safar caafimaad oo uu ku aaday dalka Itoobiya. Axmed Madoobe oo warbaahinta kula hadlay Garoonka Diyaaradaha ayaa waxa uu ka hadlay xiisada siyaasadeed ee dalka, Booqashadii C/kariin (Qalbi-dhagax), Khilaafka Imaaraadka iyo Dowladda dhexe iyo Fatahaadaha. Wuxuu sheegay Madaxweyne Axmed ...
HALKANI KA DAAWO:Qosol Kaftanka Siyaasada oo lagu Karbaashey MD Gaas Imaraadka Sir badan
May 7, 2018	Leave a comment 217 Views
Barnamaijka Kaftanka Siyaasada oo inta Badani Iidn Soo gudbino waxa Lagu karbaashey todobaadkani cabdiwali maxamed cali Gaas madaxweynaha Puntland. Siyaasada Imaraadka Ku leedahay Puntland iyo Soomaaliya ,Iyadoona Muran ka taagan yahay Puntland oo Diidey in Xidhiidhka loo jaro Imaraadka
DEG DEG-Maxaadan Ogeyn oo Maanta Ka Cusub Deegaanka Tukaraq ee Ciidanka Puntland iyo Somaliland Isku Horfadhiyaan
May 7, 2018	Leave a comment 251 Views
Xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan boqolaal katirsan ciidanka difaaca ee Puntland iyo Soomaaliland ayaa u muuqata mid lagu kala aamusay inkastoo xiisaddu ay tahay mid waalin walba halkeeda ka sii aloosan. Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaankaasi ayaa sheegaya in 72-dii saac ee ugu dambeeyey ciidanka labada dhinac ay yareeyeen dhaqdhaqaaqyadii joogtada ahaa ...
SAWIRRO: Mas’uuliyiin ka socda Galmudug oo gaaray Matabaan
May 7, 2018	Leave a comment 24 Views
Waxaa Goordhow Dagmada Matabaan ee Gobalka Hiiraan Gaaray Madaxa Xukuumada Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan. Duleedka Dagmada ayaa Waxaa Kusoo dhaweeyay qaar ka mid ah Bulshadda kunool degmada Matabaan. Sababta uu u tagay ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii loo heshiisiin lahaa Beello walaalo ah oo dhawaan ku dagaallamay gobolka Hiiraan. Galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay dib u heshiisiin ...
C/raxmaan C/shakuur “Hadii la sixi lahaa 2 Qodob oo ka mid ah Dastuurka Farmaajo Dalka Madaxweyne Kama ahaadeen”
May 7, 2018	Leave a comment 127 Views
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo aad u dhaliilada Madaxa dowladda Soomaaliya ayaa marka hore waxa uu soo dhaweeyey booqasahdii Axmed Madoobe e Xabsiga uu ku jiro Cabdi Kariin Muuse Qalbi Dhagax. “Waan uga mahad celinayaa Madaxweynaha Jubbaland Sheikh Axmad Madoobe booqashada uu ugu tegey iyo dadaalka uu ugu jiro sii daynta Qalbidhagax. Siyaasiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay ...
Dhagayso Galmudug oo Ka Hadashay Safarka Ra”isul Wasaare Khayre ee Hobyo.
May 7, 2018	Leave a comment 62 Views
Wasiirka Dekadaha Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Maamulka Galmudug Maxamed Aadan Qalab-Xoor oo la hadlay Mid ka mid ah idaacadaha Maxaliga ah ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare kheyre uu xariga ka jari doono dhimsaha Wadada isku-xirta Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo oo dib-udhis lagu sameeyay,iyo sidoo kale mashaariic kale oo halkaasi laga fulinayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in amniga Magalada Hobyo ...
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Qarax lala beegsaday Ciidamada kenya oo ka dhacay magaalada Dhoobley
Saraakiisha ciidamada Milateriga Kenya ayaa faafaahin ka bixiyay Qarax lala beegsaday Gaadiidka dagaalka ee ciidamada Kenya ee Nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaas oo marayay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubba-Hoose. Saraakiisha ayaa sheegay in mid ka mid ah Gaadiidka Dagaalka ee Ciidamada Kenya lala eegtay Qarax Miino islamarkaana ay kaga dhinteyn 7 Askari 2 kalana ay kaga dhaawacmeyn. Waxaa sidoo ...
Maxaa looga hadlayaa Kulanka Golaha Shacabka maanta uu Shir guddoomin doono Gudoomiyaha cusub?
Golaha Shacabka ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyay ku qaadanaya Xarunta Villa Hargeysa, kadib dhismo lagu bilaabay Xarunta Golaha Shacabka oo ay ku shaqeynayeen Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Xarunta Villa Hargeysa oo ay ku kulmaan Guddoonka Golaha iyo Guddiyada Joogtada waxaa kusii shaqeyn doono golaha Shacabka maadaama xaruntooda la hagaajinayo. Sida ku cad Fariinta ajendaha Kulanka Baarlamanka ee loo diro ...
Madaxda Dalalka deriska la ah Soomaaliya oo maanta ku shiraya Nairobi
Waxaa lagu waddaa in maanta oo Axad ah uu dalka Kenya ka furmo shir looga hadlaayo Xaaladda dalalka Bariga Afrika, gaar ahaan dalalka dariska la ah Soomaaliya. Shirkaan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana uu isugu yeeray Madaxda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya. Waxaa uu socon doonaa Shirkaan Muddo labo maalmood ah, waxaana lagu waddaa gabagabadda in ...
DAAWO: Wiil dhalinyaro oo 3-bil Aroos ahaa oo Xubintiisa Taranka iyo Lugtiisa bidix ku waayay Qarax ka dhacay Muqdisho
C/fataax C/llaahi Cali waa Wiil dhalinyaro ah oo Lugtiisa iyo Xubintiisa Taranka ku waayay Qaraxii 23-kii February ee sanadkaan ka dhacay Isgoyska KM0,wuxuuna markii shilkaasi uu galayay ahaa aroos saddex bilood ah. Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab,iyo qaar ka mid ah Hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa Cisbitaalka Keysaney ku booqday halkaasi oo lagu baxnaaninayo. Xaaska C/fitaax oo lagu magacaabo Sahra ...
Wasiir toogasho lagu dhaawacay oo isbitaal la dhigay……..
May 7, 2018	Leave a comment 31 Views
Mas’uuliyiinta dalka Pakistaan ayaa xaqiijiyay in Nin hubeysan uu toogtay wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Axsan Iqbal isaga oo booqasho ku marayey goob doorasho ku taallo koonfur bari ee Magaalada Narowal. Waxaa Wasiirka soo gaaray Dhawaac, waxaana lagu dabiibaya Isbitaal ku yaalla Caasimadda dalkaasi sidda ay xaqiijiysay Madaxtooyada Pakistaan. Wasiirka ayaa la sheegay in dhaawaca uu kasoo gaaray Gacanta Bidix, ...
XOG: Rajo intee la’eg ayaa laga qabaa sii deynta C/kariin Qalbi-Dhagax (Wax badan ka Ogoow)
May 7, 2018	Leave a comment 23 Views
Waa markii ugu horraysay oo Cabdikariim Muuse Qalbi-dhagax warkiisa si rasmi ah loo maqlo tan iyo markii tobon bilood ka hor loo dhiibay dowladda Itoobiya. Cabdikariim Qalbi-Dhagax ayaa ku jira xabsi-guri ku yaalla Addis-Ababa waxaana shalay halkaasi ku booqday madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Sawirro si weyn loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Axmed Madoobe iyo Qalbi-dhagax oo ...
DHAGEYSO: Xildhibaanada Aqalka Sare oo Cabasho ka ah Villa Somalia
May 7, 2018	Leave a comment 12 Views
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in Cabasho ka yihiin Madaxtooyadda Soomaaliya oo ay sheegeen in mararka qaarkood lagu dhibo. Xildhibaanada waxa ay sheegeen in Madaxtooyadda aysan aqoonsaneyn\_ Xildhibaanada Aqalka Sare, islamarkaana marar qaarkood ay la kulmaan dhibaato. Waxa ay sheegeen in Xukuumadda Soomaaliya aysan sidoo kale aqoonsaneyn Xildhibaanada Aqalka Sare. Madaxweynaha ...
Wafdi ku wajahan Beledweyne
May 3, 2018	Leave a comment 17 Views
Guddigii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhawaan u xilsaartay gargaarka dadkii uu saameeyay fatahaada Wabiga Shabeelle ayaa maanta waxa ay ku wajahan yihiin Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan. Guddigan ayaa waxaa Guddoomiye u ah Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed. Xubnahan ayaa waxa ay booqan doonaan dadka ka Barakacay gudaha Magaalada ee jooga Duleedka, waxaana ay ...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay Guddida ammaanka iyo siyaasadda ee Midowga Yurub (EU PSC). Ra’iisal Wasaaruhu waxa uu u gudbiyey farriintiisa ah in hadda ay jirto rajo badan oo Soomaaliya ka soo ka banayso, Safiirrada Midowga Yurub waxa ay muujiyeen inay si buuxda u taageersan yihiin qorshayaasha xumuumaddiisa. Kulankani waxa uu sahlay safiirrada ...
May 2, 2018	Leave a comment 54 Views
Xeer Madaxweyne Lr. 54 May 2, 2018, kuna saabsan shaqo ka eryid. Madaxweynaha Dawladda Puntland Markuu Arkay: Dastuurka Dowladda Puntland. Markuu Arkay: Baarista ka soo baxday guddiga baarista iyo soo bandhigista xogta musuqmaasuq iyo maamul xumo ee lagu magacaabay digreetada Madaxweyne MW/DPS/247/04/04/2018 Markuu Tixgeliyey: Talo soo jeedinta Guddiga Waxaa shaqadii laga eryey Madaxda iyo shaqaalaha hoos ku qoran:- Maxamuud Maxamed ...
Shabaab oo xukun dil ah fuliyay
May 2, 2018	Leave a comment 128 Views
Maxkamada Al Shabaab, ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay nin lagu eedeeyay horay inuu dil uga gaystay degaanka Mukeyla ee gobolka Hiiraan. Ehelada marxuumka horay loo dilay, ayaa waxa ay dalbadeen in loo qisaaso dilka Marxuumka, waxaana sidaasi awgeed maxkamada Shabaab ay fulisay xukunka dilka ah sidda ay sheegeen Al-Shabaab. Qaadiga Maxkamadda Shabaab ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay ...
Dowladda oo 1 Milyan ugu deeqday Gurmadka Qaran ee dadka ay saameeyeen fatahaaduhu
May 2, 2018	Leave a comment 37 Views
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka Somalia, Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shaaciyay in Xukuumaddu FS ay Taakuleynta iyo Gurmadka Qaran ee dadka ay saameeyeen fatahaaduhu ugu deeqday lacag dhan Hal-Milyan oo dollar [$1,000,000]. Mahdi Guuleed Ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in shacab iyo dawladba gacmaha laysu qabsado sidii samato bixin iyo gargaar degdeg ah loola gaari lahaa ...
Kenya oo ka qeylo dhaamisay dhibaato xun oo ka soo gaartay xirnaashaha Xuduuda Somalia(War cusub)
May 2, 2018	Leave a comment 126 Views
Wasiirka Ganacsiga iyo Wershadaynta ee Kenya, Aadan Maxamed ayaa ugu baaqay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Fred Matiang’I iyo Hay’adda Xuduudaha inay dib uga baaraan dego sidii loo furi lahaa Xuduudka ay Degmadda Mandera la wadaagto Somalia. Waxa uu carrabka ku dhuftay inay Dowladda Kenya sannad kasta ku luminayso Xuduudka Xiran macaash dhan Hal Billion oo Shillinka Kenya. Isagoo ka hadlayey magaalladda ...
SAWIRRO: Shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ka socda Brussels
Shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka furmay Xarunta Midowga Europe ee Magaalada Brussels. Shirka oo uu shir guddoominayo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa kasoo qeyb galay madax kala duwan oo ka socota dawladaha taageera Soomaaliya. Sidoo kale Shirka waxa qeyb ka ah xildhibaano Soomaaliyeed iyo masuuliyiin ka kala socota dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ...
TOOS U DAAWO Doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya
April 30, 2018	Leave a comment 19 Views
Waxaa si toos ah xarunta golaha shacabka haatan uga socota doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka Barlamaanka Federaalka Soomaaliya. Doorashadan oo ay ku tartamayaan 11-musharax ayaa la filayaa in ay maanta soo gaba gabowdo. hadaba si toos ah uga daawo Web-ka Qardhoonline doorashada gudoomiyaha golaha shacabka Somalia. HOOS KA DAAWO CODEYNTA DOORASHADA BARLAMAANKA.
Mudo toban sano kadib madaxweynayaasha labad Kuuriya oo kulmay
April 27, 2018	Leave a comment 31 Views
Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi, Kim Jong-un, ayaa sheegay in kulan madaxeedkii ugu horreeyey ee ay labda Kuuriya yeeshaan muddo toban sanadood iyo dheeraad ah, uu noqon doono bilowga taariikh cusub. Kim ayaa haatan waxa u bilaabmay wadahadal uu la leeyhay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, Moon Jae-in, oo ka dhacaya aagga milatariga ka caagan ee labada dal u dhexeeyaa. Moon ayaa isna sheegay ...
Madaxweyne ku xigeenka P/Land oo fariin adag u diray Madaxda dowlada dhexe & Maamul Goboleedyada
Magaalada Garowe ee caasimada Puntland waxaa lagu soo gaba gabeeyay shir hal maalin socday oo looga hadlayay amniga Soomaaliya, kaas oo ay ka qeyb galeyn Wasiirka amniga dowlada dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Madaxweyne ku xigeynka maamulka Puntland Cabdixakiin Camey oo hadal ka jeediyay shirkaas ayaa eedeyn waxuu u soo jeediyay madaxda dowlada dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, wuxuuna ku ...
Madaxweyne Gaas“Dowladda federaalka ma matasho Soomaaliya oo dhan”
April 26, 2018	Leave a comment 31 Views
C/wali Maxamed Cali (Gaas), Madaxweynaha Puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday Dowladda Federaalka Soomaaliya, kadib hadal uu warbaahinta ku siiyay dalka Isu taga Imaaraadka Carabta. Gaas ayaa marka hore sheegay in Puntland ay geli karto heshiisyo caalami ah, wuxuuna tilmaamay Magaalada Muqdisho oo xarunteedu tahay Dowladda dhexe in aysan matalin Soomaaliya oo dhan. Madaxweynaha Gaas oo cadeynayay in Puntland ...
DHAGEYSO:Shir Amniga Koonfurta Soomaaliya looga hadlayo oo garoowe ka furmay
Madaxweyne ku-xigeenka ahna ku-simaha madaxweynaha dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa magaalada Garoowe ka furay shir looga hadlayo ammaanka guud ee Soomaaliya gaar ahana koonfurta iyo bartamaha dalka. Mudada uu socdo shirkaani ayaa waxaa ka qaybgalay Ku xigeenka Wasaaradda Amniga gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya,Cabdinaasir Siciid Muuse iyo Wasiirada Amniga maamul goboleedyada Koonfurta Soomaaliya. Halkaan ka dhageyso Madaxwayne kuxigeenka.
Ganacsatada Qaadka Kenya oo Dowladooda ka dalbaday in la aqoonsado Somaliland
April 25, 2018	Leave a comment 41 Views
Ganacsatada Qaadka dalka Kenya ayaa sheegaya in suuq weyn oo dhinaca qaadka ah uu kaga xanniban yahay Somaliland islamarkaana ay u baahan yihiin in ay dowladda wax ka beddesho mowqifkeeda Somaliland. Ururka Ganacsatada Qaadka dalka Kenya ayaa sheegay in qaadkooda loo yaqaan Miiraa,uu dalab fiican ka heysto Somaliland laakiin ay dhibaato ku tahay canshuurta xad dhaafka ah ee ay saartay ...
DEG DEG:- Dagaal ka socda Bakool
April 25, 2018	Leave a comment 30 Views
Wararaka inaga soo gaaraya degaan ku dhaw degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu ka socdo halkaasi. Dagaalkan ayaa waxa uu u dhaxeeyaa Ciidamo ka tirsan Millitariga Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah iyo ururka Al-shabaab. warbaahinta warkan waxaa u xaqiijiyay Taliyaha Ciidanka Booliska Goboolka Bakool iyo saraakiil kale oo Ciidan. ...
April 25, 2018	Leave a comment 34 Views
Siyaasiga Faarax Macalin oo horay u soo noqday Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Kenya ayaa Imaaraadka Carabta ku tilmaamay cadawga Soomaaliya, waxa uuna qaa’inul wadaniyiin ku tilmaamay Madaxda maamul gobaleedyada ee ku sugan Imaaraadka Carabta. Faarax waxa uu sidoo kale sheegay in ay ku fashilmeen Ilaalinta Qaranimada Soomaaliya Madaxdii Hore sida Cabdullaahi Yuusuf, Shiekh Shariif, iyo Xasan Sheikh. Faarax waxa uuna Amaanay ...
Dowladda Sacuudiga oo Xabsiga Dhigtay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo loo heysto…
April 24, 2018	Leave a comment 36 Views
Ciidamada amaanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xabsiga dhigay 30 qof oo ka soo kala jeeda 12 dal kuwaa oo lala xeriirinayo falal argagaxisnimo oo bishii April ka dhacay dalkaasi, sida boolisku sheegeen. Dadkan la tuhmay ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu hayaa baaritaano ku saabsan ineey xeriir la leeyihiin kooxaha Argagixsada loogu yeero, dadka la xir xiray ayaa ka soo ...
DAAWO: Waraysi la isku farasaaray Uurcade & Cirro iyo musiiba ka taagan wadani
April 24, 2018	Leave a comment 48 Views
Xerada Jen. Gordan ee Muqdisho oo shalay ciidammo ka ka tirsan Dowladda Somalia ay ku dagaalameen ayaa maanta lagu arkayay ciidammo kumaandoos ah xeradaas ku sugan. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Warbaahinta u sheegay in ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyay Xerada Jen. Gordan ee Dowladda Imaaraadka ay ku tababbari jireen Ciidamada Somalia. “Ciidamada Danab oo laga keenay ...
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan ayaa goordhaweyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii Wasaaradda. Waxa uu sheegay Mursal in uu u taagan yahay xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana uu rajeynayo in uu ku guuleysto. Waa wasiirkii Afaraad ee isku casila doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ee la filayo in la qabto 30-ka bishan April.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan uu maanta ka qeyb gali lahaa Magaalada Nairobi oo ay joojisay dowladda Kenya. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa ah guddoomiyaha Xisbiga Wadajir, waxaana lagu waday in Xafladda la qabto 1: 00 Duhurnimo ee maanta kana dhici laheyd Fagaaraha Sir Cali Muslim Club oo ku yaalla Magalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa ...
Guddoonka Golaha Shacabka Oo Magacaabay Xubnaha Guddiga Doorashada
April 21, 2018	Leave a comment 74 Views
Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo bandhigay Magacyada xubnaha guddiga qaban qaabada doorashada ee guddoomiyaha golaha Shacabka. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka doodaya xubnahaan la magacaabay oo ka kooban 15 xubnood, waxaana dood ka dib la filayaa in xildhibaannada golaha shacabka ay meelmariyaan. Kursigaan oo hadda ay sheegeen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in ay u taagan yihiin ...
Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xafiiskiisa Wasaaradda Gaashaandhigga kaga guddoomay warqadaha danjiranimo Safiirka Dalka Qatar ee loo soo Magacabay Soomaaliya Mudane Xasan Xamsa Asad. Danjire Xamsa ayaa Madaxweyne Farmaajo u gudbiyay salaan uu uga siday Amiirka Dalka Qatar Sheekh Tamiim Binu Xamad, waxa uuna adkeeyey danjirahu in uu kaaalintiisa ka qaadan doono xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal. ...
DHAGEYSO:Ciidamadii uu Imaaraadka tababari jiray iyo gaadiid lala wareegay.
April 21, 2018	Leave a comment 45 Views
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay si buuxda ula wareegtay ciidamadii dowladda Imaaraadka Carabta ay tababartay ee ku sugnaa xeradda General Goordon. Ciidamada oo ka badan 2000 kun oo Askari ayaa sidoo kale waxaa wehlinaayay qalab ciidan iyo Gaadiid sidda ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamaddaan ay maanta ...
Madaxwayne Gaas oo safar ugu ambabaxay dalka Imaaraadka kana hadlay Xariga Boqor Buur-Madow
April 21, 2018	Leave a comment 60 Views
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Bosaso ee xarunta ganacasiga Puntland isagoona ku sii jeeda Magaalada Abu Dabai ee xarunta Isutagga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Gaas oo saxaafadda Kula Hadlay Madaxtooyada ka hor inta uu san dhoofin ayaa sheegay inuu Dalka Imaaradku U aadi Doono Adkeynta Xiriirka Kala Dhaxeeya, Iyo Sidii loo Wanaajin Laha. ...
Muxuu Xildhibaan Caddow Cali Gees ka yiri weerarkii lagu qaaday Hooygiisa ku yaala Dekadda Muqdisho?
April 21, 2018	Leave a comment 61 Views
Sida aan wararkeena hore ku sheegnay ciidamada NISA ayaa maalin ka hor weerar ku qaaday Hooyga uu Dekadda magaalada Muqdisho ka degan yahay Xildhibaan Caddow Cali Gees. Xildhibaanka ayaa xiliga uu dhacaayay weerarka howlgalka ah ka maqnaa dalka, waxaana la sheegay in howlgalkaasi uu qaatay saacado badan. Weerarka kadib Xildhibaanka oo lagu wargaliyay qaabka uu u dhacay weerarka ayaa sheegay ...